इतिहासका गुरु- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
बाबुराम आचार्यले नेपालको इतिहासलाई अनुश्रुति, किंवदन्ती र वंशावली मात्रको तहबाट माथि उठाए र ठोस प्रमाणित स्रोत तथा साधनको सहयोगले इतिहास लेखे ।
फाल्गुन २९, २०७२ हिमेश
राणाकालमा नेपालको इतिहास उहाँसँगै थियो,’ इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यलाई लिएर त्यसै यस्तो भनिएको थिएन । राणाकाल इतिहासलाई लिएर कलम चलाउने समय नै थिएन । त्यतिबेला राजनीतिक स्थिति नै बेग्लै थियो ।
जति बेला बाबुराम आचार्यलाई पहिलोपल्ट इतिहासबारे रुचि उत्पन्न भएको थियो, ठीक त्यही बेला उनलाई भनिएको थियो, ‘इतिहासका विषयमा आँखा चिम्ल र आँ पनि नगर ।’ त्यति बेला इतिहासबारे जिज्ञासा राख्नुलाई पनि अपराध मानिन्थ्यो । यही परिस्थितिमा उनले नेपालको इतिहास संकलन गर्ने प्रयास सुरु गरे ।
त्यति बेला नेपालको इतिहासलाई बुझ्न पूर्णत: विदेशीले लेखेका वृत्तान्तमा भर पर्नुपथ्र्यो । विशेषत: अंग्रेजी लेखकहरूमा । बाबुराम आचार्यले आफ्नै प्रयासले कागजपत्रको अध्ययन गरे । आपैंm अनुसन्धान गरे । उनले नेपालको इतिहासलाई अनुश्रुति, किंवदन्ती र वंशावली मात्रको तहबाट माथि उठाए र ठोस प्रमाणित स्रोत तथा साधनको सहयोगले इतिहास लेखे । यस काममा पनि उनी नै अग्रणी छन् ।
उनको सबैभन्दा ठूलो विशेषता थियो, तीक्ष्ण स्मरण । उनी एकपल्ट सुनेको कहिल्यै बिर्संदैनथिए । घटना र तिथिमिति उनलाई कण्ठस्थजस्तै हुने गथ्र्यो । लगातारको मिहिनेतले गर्दा उनका आँखा सुरुमै कमजोर भइसकेका थिए ।
यिनै इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यको आज १ सय २८ औं जन्म दिवस । उनको जन्म विक्रम संवत् १९४४ फागुन २९ मा भएको थियो । नेपाली इतिहास लेखनमा अद्वितीय योगदान दिएका यिनै बाबुराम आचार्यलाई अहिलेको पुस्ताले बिर्सेका त छैनन् ? अथवा उनलाई सम्झिने यो दिन कतै खालि सामान्य औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको त छैन ? उनलाई सुनेका र पढेका पुराना पुस्ताका इतिहासकारहरूको गुनासो यस्तै छ ।
नेपाली इतिहासमा जसले कलम चलाउने प्रयास गरे, त्यसमध्ये उनी अग्रज साधक थिए । प्राय: पुराना पुस्ताका इतिहासकारमा योगी नरहरि नाथ, नयराज पन्त, सूर्यविक्रम ज्ञवाली, डिल्लीरमण रेग्मी र धनवज्र वज्राचार्यको नाम आउने गर्छ । त्यसमध्ये पनि नेपालको इतिहासलाई प्रामाणिक ढंगले लिपिबद्ध गर्ने कामको सुरुआत पहिलोपल्ट बाबुराम आचार्यले नै गरेका थिए ।
निजामती सेवाका पहिलो टपर
उनको जन्म काठमाडौंको गौचर सिनामंगलमा भएको थियो । अहिले त्यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परिणत भइसकेको छ । विक्रम संवत् २०१७ सालमा गौचरमा विमालस्थल विस्तार गर्ने क्रममा उनी बस्दै आएको घर र खेत सरकारी अधिग्रहणमा परेको थियो । उनको आफ्नै पुरानो इतिहास मेटिएको स्थिति थियो, त्यो । त्यसयता उनी बत्तीसपुतलीमा आएर बस्न थालेका थिए ।
चन्द्रशमशेरको पालामा विक्रम संवत् १९६७ मा पहिलोपल्ट निजामती सेवामा प्रवेशका लागि खुला परीक्षा लिइएको थियो । त्यसमा उनले पनि भाग लिएका थिए र पहिलो स्थानमा रहेर खरदार पदमा छनोट पनि भए ।
बाबुराम कसरी इतिहासतर्फ आकर्षित भए त ? यसबारे रोचक घटना रहेको पाइन्छ, जुन उनी आपैंmले सुनाएको मानिन्छ । यो विक्रम संवत् १९७७ तिरको घटना हो । उनी आफ्ना स्वर्गीय बुबाको अस्थि सेलाउन बनारसतर्फ गएका बेला पश्चिमी विहारको आरा सहरमा पुगे । त्यहाँ उनको हातमा एउटा त्रैमासिक पत्रिका पर्‍यो । त्यसमा लिच्छवी राजा जयदेव द्वितीयको शिलाखेलबारे लेखिएको थियो । त्यो शिलालेख पशुपतिमा रहेको थियो । उनले त्यति बेलासम्म जयदेव नामका राजा थिए भनेर पनि सुनेका थिएनन् । तर, यो घटनाले उनमा नेपालको पुरातत्त्वबारे अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने रूचि बढेको थियो । त्यसको चार वर्षपछि उनले एउटा वंशावली हात पारे र यसले उनमा नेपाली इतिहासमा ध्यान मोडियो ।
काठमाडौं फर्केयता उनले पाएसम्मका पुराना शिलालेख, वंशावली र अन्य कागजपत्रको खेजेर पढ्न थाले । यसका लागि उनी काठमाडौं सहरका भित्री गल्ली गल्ली पुगे । पुराना भारदारहरूको घरघर पुगे । जति पुराना सामग्री पाए, त्यसको संकलन गरे । यसै क्रममा उनी गोर्खा पनि पुगेका थिए । यही अध्ययनको क्रममा उनको दुवै आँखा निकै कमजोर भए ।
उनले २३ वर्षको उमेरमा जागिर खाएका थिए । लगभग ३० वर्ष जागिर खाए र खरदार पदमै सेवानिवृत्ति पनि भए । त्यसयता उनको आर्थिक स्थिति खस्केको थियो, उनको जीवनमा दु:ख र विपत्तिका दिन सुरु भए । उनी आँखा नदेख्ने स्थितिमा पुगिसकेका थिए ।
बाबुराम आचार्यले धेरै इतिहासकारलाई नेपाली इतिहासको अध्ययन र अनुसन्धानका लागि प्रेरित गरे । उनको सम्पर्कमा आउने पहिलो अनुसन्धानकर्ता सूर्यविक्रम ज्ञवाली नै रहेको मानिन्छ ।
सूर्यविक्रम ज्ञवालीले चर्चित कृति पृथ्वीनारायण शाहको रचना गर्दा आफूले लेखेको खाममा बन्द गरेर दार्जिलिङबाट काठमाडौं पठाउँथे । बाबुराम आचार्यले त्यसलाई परिमार्जित गरेर फेरि फिर्ता पठाउने गर्थे । उनका समकालीन र त्यसपछिका पुस्ताका लगभग सबै इतिहासकार उनको सम्पर्कमा रहे । त्यति मात्र नभएर नेपालको अध्ययनका लागि आएका विदेशी पनि उनकै निरन्तर सम्पर्कमा रहने गर्थे ।
सगरमाथाको नाम, पृथ्वीनारायणको जीवनी र खस राज्यको खोजी
नेपालका लागि उनको सबैभन्दा ठूलो योगदान विश्वको सर्वोच्च शिखरको नेपाली नामकरण हो, सगरमाथाका रूपमा । नेपालको पहिलो नक्सामा सगरमाथालाई एभरेस्ट भनिएको थियो । त्यसबाहेक तिब्बती नाम चोमोलोङमा उल्लेख थियो । यसलाई ‘सगरमाथा’ नामकरण आचार्यले नै गरे । यसै विषयमा उनले शारदा पत्रिकामा एउटा लेख पनि लेखेका थिए । त्यसै कारणले उनको जागिर जानेसम्मको स्थिति आएको थियो । यस्तै उनको अर्को योगदान पृथ्वीनारायण शाहबारे विस्तृतमा लेख्नु थियो ।
पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेश उनकै संकलन हुन् । बाबुराम आचार्यको पालामा काठमाडौंबाहिर गएर इतिहासको अध्ययन र अनुसन्धान गर्नु कुनै पनि अर्थमा सजिलो थिएन । तर, उनी त्यस काममा पनि पछाडि परेनन् । नेपालको सुदूरपश्चिममा विस्तार भएको खस राज्यको अस्तित्वलाई सबैभन्दा पहिले बाहिर प्रकाशमा ल्याउने श्रेय पनि बाबुराम आचार्यलाई जान्छ । उनको जीवनकालमा छ कृति प्रकाशित भए । त्यसमध्ये इतिहासका पुस्तक प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि मात्र सम्भव भएको थियो ।
त्यसमा ‘तुलनात्मक सुन्दरकाव्य’, ‘पुराना कवि र कविता’, ‘श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश’, ‘चीन र तिब्बतसँगको इतिहास’, ‘नेपालको संक्षिप्त वृत्तान्त (खण्ड १)’ तथा ‘श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको संक्षिप्त जीवनी (भाग १–४)’ रहेका छन् । पृथ्वीनारायण शाहको जीवनी लेख्दा बाबुराम आचार्य ८२ वर्षका भइसकेका थिए । त्यसैबाट उनी कति मिहिनेती थिए, अनुमान गर्न सकिन्छ ।
उनको मृत्युपछि भने ‘नेपालको सांस्कृतिक परम्परा’, ‘अब यस्तो कहिल्यै नहोस्’, ‘चीन, तिब्बत र नेपाल’, ‘श्री ५ प्रतापसिंह शाह’, ‘प्राचीनकालको नेपाल’, ‘जनरल भीमसेन थापा : यिनलाई मैले यस्तो देखें’, ‘जनरल भीमसेन थापा : यिनको उत्थान तथा पतन’ र ‘हाम्रो राष्ट्रभाषा नेपाली’ प्रकाशित भएका छन् । यी सबै उनका कान्छा छोरा श्रीकृष्ण आचार्यले प्रकाशनमा ल्याएका हुन् । त्यस क्रममा उनले आफ्ना बुबाका लेखलाई सम्पादनसमेत गरेका थिए ।
बाबुराम आचार्यका कृतिको पर्याप्त आलोचना पनि हुने गरेको छ । उनका सुरुआती किताबमा पर्याप्त कमजोरी रहेको पनि मानिन्छ । उनका सुरुका कृतिमा ऐतिहासिक स्रोत र त्यसको विवरणको अभाव पाइन्छ । उनी आपैंmले पनि किताबमा कमजोरी रहेको स्विकारेका छन् । उनको मुख्य कृति पृथ्वीनारायण शाहको जीवनी हो । यसमा उनले ऐतिहासिक स्रोत खुलाउन प्रशस्त मिमिहेन गरेका छन् । तर यसमा पनि धेरै कमजोरी रहेको मानिन्छ ।
उनले यसमा पृथ्वीनारायण शाहका धेरै कमजोरीलाई लुकाएका छन् । तात्कालीन युवराजाधिराज वीरेन्द्रकै आग्रहमा बाबुराम आचार्यले नेपालको संक्षिप्त वृत्तान्त र पृथ्वीनारायण शाहको जीवनी लेखेका हुन् । यसमा पृथ्वीनारायण शाहका कमजोरी ढाकछोप गरिएको छ । दरबारलाई खुसी पार्न त्यति बेला बाबुराम आचार्यलाई अगाडि सारिएको पनि भनिन्छ ।
यस्तै नेपाली इतिहासमा भीमसेन थापाबारे दुई धार पाइन्छ, एउटा अत्यधिक सकारात्मक र अर्को नकारात्मक । त्यसमध्ये बाबुराम आचार्यले पनि एक धारको प्रतिनिधित्व गर्छन्, जसमा उनले भीमसेन थापाको पर्याप्त आलोचना गरेको पाइन्छ । उनले विशेषत: भीमसेन थापाले अंग्रेजविरुद्ध गरेको युद्धबारे बढी आलोचना गरेको पाइन्छ । तर पनि आज उनको जन्म दिवसमा नेपालको इतिहास लेखनमा उनको अद्वितीय र अतुलनीय योगदानलाई बिर्सन सकिन्न ।
प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७२ १०:०६
दुई सय वर्षअघिको त्यो सन्धि
जसले नक्सा परिवर्तन गर्‍यो
नेपालको राजनीतिमा निकै चर्चामा आउने सुगौली सन्धि भएको हिजो दुई सय वर्ष पुग्यो । के थियो त्यो सन्धि जसले नेपालको नक्सा नै परिवर्तन गरेको थियो ?
फाल्गुन २२, २०७२ हिमेश
आजको ठीक दुई सय वर्षअगाडिजस्तो नेपालको अस्तित्वमाथि यति धेरै संकट कहिल्यै देखिएको थिएन ।
नेपाल यति धेरै डर र त्रासबाट पनि कहिल्यै गुज्रेको थिएन । शत्रु सेना काठमाडौंको यति धेरै नजिक पनि त पुगेको थिएन । सन् १८१६ को फेब्रुअरी २७ । जनरल अक्टरलोनीको नेतृत्वमा अंग्रेज फौज मकवानपुरगढी पुगिसकेको थियो । त्यसविरुद्ध नेपाली सेनाले युद्ध पनि गरेको थियो ।
तर, शमशेर रानाको नेतृत्वमा रहेको सेना पछाडि हट्न बाध्य रह्यो । नेपालका आठ सय फौजको ज्यान गएको थियो । फेब्रुअरी २९ कर्णेल कोलीको नेतृत्वको अंग्रेज फौजसँग हरिहरिपुरगढमा अर्को युद्ध भयो । नेपाली सेना रणजोरसिंहको नेतृत्वमा थियो । अंग्रेजले मगाएको थप फौज र तोप आइपुगेपछि त्यहाँबाट पनि नेपाली सेना पछाडि हट्न बाध्य भयो ।
यी सबैबीच राजधानी काठमाडौंमा हल्ला फैलियो, अक्टरलोनीको फौज काठमाडौंतर्फ बढ्दै छ । भनिन्छ, त्यसैको डरले देशका बहुमूल्य सम्पत्ति अन्यत्र सार्ने काम पनि भएको थियो । सन् १८१४–१६ को नेपाल–अंग्रेज युद्ध खासमा समाप्त भइसकेको थियो । फेब्रुअरीको अन्तिम साताका यी सबै सैनिक गतिविधि त्यस युद्धको अन्तिम केही क्षण मात्र थिए । युद्ध त मेतिर नै समाप्त भइसकेको थियो ।
यसै परिस्थितिमा सुगौली सन्धि भएको थियो, जसलाई इतिहासको भाषामा एउटा विजयी सेनाले पराजित देशमाथि गर्न बाध्य पारिएको सन्धि भनिन्छ । सुगौली सन्धि नेपालका लागि धेरै अर्थमा अपमानजनक थियो । इतिहासकार श्रीरामप्रसाद उपाध्यायले लेखेका छन्, ‘यो सन्धिले नेपालीलाई कहिल्यै निको हुन नसक्ने घाउ दिएर गएको थियो । यो नेपाली राष्ट्रियतामाथि घोर अन्याय थियो ।’
नेपालको तर्फबाट यस सन्धिमा गजराज मिश्रले नोभेम्बर २८ मा हस्ताक्षर गरेका थिए । तात्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट भने डिसेम्बर २ मा लेफ्टिनेन्ट कर्नेल पेरिस ब्रडसाले हस्ताक्षर गरे । यस सन्धिका नौ धारा थिए । यो सन्धिका केही धाराले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व अस्वीकार गरेको थियो । केही धाराले भने नेपालको स्वतन्त्रता, अखण्डता र सार्वभौमसत्तालाई मानेको पनि थियो ।
नेपाली इतिहासका विद्यार्थीलाई रोमाञ्चित तुल्याउने तथ्य के छ भने सुगौली सन्धि तय भयो, तर त्यसलाई नेपालले अनुमोदन गर्न लामै समय आनाकानी गरेको थियो । त्यसको पहिलो कारण थियो, नेपाल अंग्रेजसँग फेरि युद्ध गर्न चाहन्थ्यो । खासमा नेपाली भारदारमध्ये ठूलो संख्या त्यस सन्धिको विरोधमा थिए र त्यसलाई मान्न नहुने पक्षका थिए ।
नेपालको दाउ थियो, वर्षाको समय लाग्नुपर्छ, अंग्रेजसँग फेरि युद्ध सुरु गर्ने । त्यो समय अंग्रेजका लागि नेपाली भूमि युद्ध लड्न उपयुक्त नहुने केही भारदारको तर्क थियो । दोस्रो कारण, नेपालको अरूबाट सहयोग पाउने विश्वास थियो । यो युद्धमा आफूलाई सहयोग गर्न नेपालले धेरैसँग अनुरोध पनि गरेको थियो । अंग्रेजको बढ्दो शक्ति अगाडि नेपाललाई सहयोग गर्न कोही अगाडि बढ्न चाहेन ।
नेपाललाई त्यति बेला सबैभन्दा बढी निराश चीनले गरेको थियो । नेपालले यसअगाडि तिब्बतसँग पनि युद्ध गरेको थियो र त्यस युद्धपछि भएको सन्धि अनुसार तेस्रो पक्षसँग युद्ध भएमा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्ने थियो । तर, चीन पनि त्यस युद्धमा होमिन चाहेन । चीनले युद्धबारे बुझ्न आफ्नो एक प्रतिनिधि पनि तिब्बततर्फ खटाएको त थियो । तर त्यो टोली त्यहाँ पुग्दा अगस्ट लागिसकेको थियो ।
त्यो टोली धेरै ढिलो मात्र आइपुगेको थियो । सन्धि अनुमोदन गर्न अगाडि नेपालका यी सबै घटनाक्रमलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीले नजिकबाट हेरिरहेको थियो नै । त्यसैले नै अंग्रेज सेना राजधानी काठमाडौंको यति नजिक आइपुगेको थियो, चेतावनीको ठूलो सन्देश लिएर । यस्तोमा नेपाल सुगौली सन्धिलाई अनुमान गर्न बाध्य भयो । मार्च ४ मा नेपालले सुगौली सन्धिलाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेको थियो ।
यसरी आजबाट ठीक दुई वर्ष र एक दिन अगाडि सुगौली सन्धि अनुमोदनसँगै नेपाल सधैंका लागि निर्णायक रूपमा फेरियो । नेपाल सरकारको लालमोहरसहित स्वीकृत भएको सुगौली सन्धि लिएर चन्द्रशेखर उपाध्याय अक्टरलोनीको छाउनीमा पुगे । इतिहासकार विजयकुमार मानन्धर यसलाई नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ मान्छन् ।
मार्च ४ पछि नै नेपालले लगभग अहिलेको भौगोलिक रूप लियो । नेपालको इतिहासमा यो सन्धि वास्तवमै कस्तो ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ थियो भने यसको प्रभाव भौगोलिक मात्र रहेन्, आर्थिक, कूटनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा परेको थियो । युद्धले गर्दा नेपालले आफ्नो ठूलो भूभाग अंग्रेजलाई बुझाउनुपरेको थियो । नेपालले एक तिहाई भूभाग गुमाएको थियो । यो ४० हजार वर्ग माइल हुन आउँछ ।
नेपालले कुमाउँ, गढवाल, नैनीताल, दार्जिलिङजस्ता स्थान गुमाएको थियो । यी स्थानमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले सुरुदेखि नै आँँखा लगाएको थियो । युद्धपछि अंग्रेजले ती सबैलाई हात पारेर आफ्नो योजनामा सफल पनि भएको थियो । खासमा युद्धको मुख्य र तत्कालीन कारण स्युराज र बुटवलको विवाद थियो । अंग्रेजले त्यसैलाई निहुँ बनाएको थियो । तर उसको खास भित्री मनसाय अरू नै थियो ।
नेपाली इतिहासका विद्यार्थीले धेरै प्रश्न राख्ने एउटा तथ्य के हो भने अक्टरलोनी नेतृत्वको अंग्रेज फौज वास्तवमै किन काठमाडौं प्रवेश गर्न चाहेन ? फौजले चाहेको भए, दुई तीन दिनमा काठमाडौं पुग्न सक्थ्यो । त्यसो भए, अंग्रेजले युद्ध गर्न चाहेको कारण के थियो त ? यसको पनि इतिहासकार मानन्धरसँग विश्लेषण छ र यो उनी अगाडिका इतिहासकारको सोचसँग मिल्छ पनि ।
युद्धअगाडि एकातर्फ नेपाल आफ्नो आकार बढाउन अगाडि बढिरहेको थियो भने त्यसको ठीकविपरीत दिशाबाट त्यस्तै मनसाय लिएर इस्ट इन्डिया कम्पनी पनि आइरहेको थियो । त्यो स्थितिमा दुवैको स्वार्थ एकअर्कासँग जुध्थ्यो । अंग्रेजको पहिलो लक्ष्य नेपालको त्यो अभियानलाई स्थगित गर्नु थियो । त्यसका लागि अंग्रेजले नेपालको मुख्य शक्ति रहेको सेना कमजोर बनाउन चाह्यो ।
त्यसैले अंग्रेजको नेपालमाथि खास ठूलो रुचि थिएन । उसको जे रुचि थियो त्यो सुगौली सन्धिले पूरा गर्ने तय थियो । त्यसैमा टिकेर अंग्रेजले पछि नेपालबाट धेरै फाइदा लिन खोजेको थियो र त्यो कालान्तरमा पूरा पनि भयो । सन् १८१६ कै डिसेम्बर ८ मा अंग्रेजले सुगौली सन्धिमा संशोधन गरेर नेपाललाई केही भूभाग फिर्ता पनि दिएको थियो, जसबारे नेपाली इतिहासमा खासै चर्चा हुन्न ।
बरु धेरै चर्चा भने जंगबहादुरको पालामा प्राप्त भएको कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दियालाई लिएर हुन्छ । त्यसपछि भने नेपालले थप भूभाग फिर्ता पाएन । सन् १९२३ मा चन्द्रशमशेरको पालामा अंग्रेजले औपचारिक रूपमा नेपालको सार्वभौमिकता स्विकार्दा किन पुराना भूभाग फिर्ता लिने प्रयास भएन ? यो प्रश्न अझै उठ्ने गरेको छ । अथवा यो प्रयास मोहनशमशेरकै पालासम्म पनि हुन सक्थ्यो ।
नेपालले अंग्रेजसँगको युद्ध हार्नुपछाडि पनि धेरै कारण छन् र ती स्वाभाविक पनि देखिन्छन् । इतिहासकार उपाध्यायले औंल्याएजस्तै, नेपाली सेनामा प्राविधिक ज्ञानको कमी थियो । दुई पक्षको सेनामा शक्तिको ठूलो असमानता थियो । नेपाली सेनामा सञ्चार र सम्पर्कको अभाव थियो । र, केही हदसम्म नेपालीमा एकताको कमी पनि थियो, किनभने ठूलो संख्यामा भारदार भीमसेन थापाको विरोधमा थिए ।
वास्तवमै त्यति बेला अंग्रेजसँग युद्ध गर्नुहुन्छ अथवा हुन्न भनेर नेपाली भारदार दुई खेमामा विभाजन भएका थिए । एक युद्धका पक्षमा थिए, अर्को विरोधमा । यसै विषयलाई लिएर अहिले आएर अर्का इतिहासकार भवेश्वर पँगेनी के मान्छन् भने अंग्रेजसँग युद्ध निश्चितजस्तै थियो, किनभने तिनीहरूको नियत नै त्यही थियो । इतिहासकार पँंगेनी मान्छन्, अंग्रेजको मनसाय नै युद्ध थियो । त्यसैले युद्ध रोकिन सकिने स्थिति थिएन ।
सुगौली सन्धिका धेरै दीर्घकालीन असर देखिए । सबैभन्दा ठूलो नेपालको विस्तार सधैंका लागि रोकियो । सन्धिपछि नेपालले चारै दिशातर्फ अगाडि बढ्ने अवसर गुमाएको थियो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप यही समयबाट सुरु भयो । सन्धिअनुसार अंग्रेज रेजिमेन्टले काठमाडौंमा प्रवेश पाएको थियो । अंग्रेजी हस्तक्षेप भीमसेन थापाकै पालामा कतिसम्म बढ्यो भने यो नै अन्तत: उनको पतनको कारण बन्यो ।
सन्धि अगाडिसम्म नेपाली सेना मात्र होइन, भारदारको मनस्थिति नै लडाकु थियो । युद्ध के रोकियो, विशेषत: भारदारहरू फुर्सदिला हुन थाले । यही फुर्सदले नेपाली राजनीतिमा सधैंका लागि
षड्यन्त्रलाई प्रवेश गरायो । यसको पहिलो सिकार त भीमसेन थापा नै थिए । उनको अन्त्यसँगै यो षड्यन्त्र रोकिएन । नेपाली दरबारमा हत्याको क्रम सुरु भयो र यसैको परिणाम मानिन्छ, कोतपर्व र भण्डारखाल पर्व ।
यसै सन्धिपछि ब्रिटिस सेनामा नेपालीको प्रवेशको बाटो पनि तय भयो । युद्धका क्रममा अंग्रेजले राम्रोसँग बुझे, नेपाली सेनाका वीरता । त्यसैले अक्टरलोनीले गरेको सन्धिमै बेलायती सेनामा नेपालीको भर्तीका लागि अनुमति दिइएको थियो । लामो समयको विवादपछि रणोद्दीप सिंहको पालामा नेपालीलाई ब्रिटिस सेनामा भर्नाको पूर्ण स्वतन्त्रता दिइयो ।
यो त्यही सन्धि थियो, जसले नेपालको अहिलेको नक्सा तय गर्‍यो । ठूलो भूभाग गुमेन मात्रै, विदेशी हस्तक्षेप पनि बढ्यो । भारतबाट अंग्रेजहरू बिदा भएपछि पनि यो सन्धिअनुसारको सीमा कायम रह्यो । सन् १९४७ मा अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भएपछि बनेको स्वतन्त्र भारतसँग नेपालको अहिलेसम्मको राजनीतिक सम्बन्धको जगमा पनि यही सन्धि बस्यो ।
प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७२ १०:१५